रबिले सिधाकुरा को लोगो र नाम दुरुपयोग गरेँ कानुनी लडाइ लड्ने – NepalajaMedia
‘न्युज २४’ले ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम नियमित रुपमै प्रसारण जारी राख्ने बताएको छ । रवि लामिछाने टेलिभिजनबाट बाहिरिएसँगै टेलिभिजनले वैकिल्पक प्रस्तोतामार्फत कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा प्रसारण गर्ने भएको हो ।
‘यो कार्यक्रम न्युज २४को आफ्नै भएकाले प्रस्ताताले यसमा दावी गर्न मिल्ने ठाउँ छैन,’ एक पदाधिकारी भन्छन्,’हामीले रविजीसँग गरेको सम्झौतामा उहाँको ‘जब डिस्क्रिप्सन’ स्पष्ट छ, त्यसमा कार्यक्रमको सर्वाधिकार न्युज २४ मै निहीत उल्लेख छ ।’
कार्यक्रमको ‘क्रेडिट टाइटल’मा पनि कार्यक्रमको सर्वाधिकार कम्पनीको हुने उल्लेख रहेको कम्पनीको दावी छ ।कार्यक्रमको कपिराइटबारे लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा केही बताएका छैनन् ।
Prevधन लाभ हुनु अगाडि मिल्छ यि कुराहरुको सङ्केत! पूरा पढि ॐ लेख्नु होस्!
Nextबिचरा मनिका ,श्रीमान् खोज्दै जाँदा सौता फेला परिन्